Doormụ nwanyị dị n'èzí na-eji akwa mkpuchi windo ọkachamara dị elu
Ọbụna mgbe ị chere na oyi akwa dị mma, mgbe ụfọdụ, ifufe nwere ike ime ya ezigbo oyi. Ma ị nọ n’elu ugwu nke ikuku na-efegharị na mba ahụ, ma ọ bụ na-esikwa n’ụlọ gị na-aga, anyị nwere ike irite uru site na ụmụ nwanyị na-egbochi ikuku, nke na-enyere anyị aka ịdị ọcha na nkụ. Anyị na-enye ọtụtụ ọnụọgụ windo ndị nwoke kachasị ọhụrụ na jaket ndị ezubere iji kpochigide na ikpo ọkụ ma mee ka ikuku ghara ịdị ike.
Ejiri jaketị skeeti ụmụ nwanyị maka gburugburu dị oke egwu ma bụrụ nke a na-achọ mma site na akwa gbatịrị ma jupụta na ngwa ndị dị nro. Ha nwere okpu a kpara akpa, aka ogologo nke nwere akwa na-agbanwe n'ime ya, akwa zipa n'okpuru ogwe aka, uwe mwepu na-ewepu iwe, akpa enyo na akwa mgbochi mmiri na akpa abụọ edozi. Ọrụ teknụzụ nwere oke nnwere onwe ijegharị dịka ikpere aka
High Quality Custom woMens SoftshellJacket N'èzí